Home / Knowledge Corner
New Year Resolution for 2020
✍️ ၂၀၂၀ အတွက် ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေ ရှိနေပြီလဲ ? 🔸 ရုတ်တရက် ဒီမေးခွန်းအတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ သေချာတာတစ်ခုက သင့်မှာ Yearly Goal & Resolution ရှိမနေလို့ပါ။ အလွယ်ပြောရရင် ဒီ တစ်နှစ်အတွင်း ငါ ဘာဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေ သေချာ စိစစ်ချမှတ်ထားတာမျိုး မရှိသေးဘူးပေါ့။ 🔸 Time Management is the Life Management ဆိုသလိုပဲ။ ကိုယ်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ အချိန်တစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းက ကိုယ့်ဘဝကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းပါ။ ဒါကြောင့် ရေရာသေချာတဲ့ ပန်းတိုင်အိပ်မက်မျိုးမရှိဘဲ အချိန်တွေ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ကုန်ဆုံးလိုက်တာက ကိုယ့် ဘ၀ ကို ထိုင်ဖြုန်းတီးနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ 🔸 ဒီလို Yearly Goal & Resolution တွေ ချမှတ်ထားခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်ပန်းတိုင်နဲ့ နီးကပ်လာမယ်။ Productive ပိုဖြစ်လာမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ၃၆၅ ရက်က သာမန်ထက် ပို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ဖြတ်သန်းလာနိုင်မယ်ပေါ့။ 🔸 ကဲ …. ဒီတော့ လာမယ့် ၂၀၂၀ တစ်နှစ်အတောအတွင်းမှာ ကိုယ့် ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကို ဘယ်လို ချမှတ်ရမလဲ၊ ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဖြတ်သန်းရမလဲ တွေးတောနေတယ်ဆိုရင် ဒီစာလေးကို အချိန် ခဏလောက်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးပြီး New Year Resolution တွေ ချမှတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
▪️ တခါတလေ ဘဝမှာ ကိုယ်လျှောက်လိုတဲ့လမ်း၊ ရောက်ချင်ပန်းတိုင် ရှိနေပါရက် ၊ ကြိုးစား သွားချင်ပါရက်နဲ့ မဖြစ်နိုင်လောက်မှာ ကျရှုံးသွားမှာ ကြောက်ပြီး နောက်ဆုတ်လိုက်တာမျိုး ရှိခဲ့ဖူလား ? ▪️ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုချမှတ်တိုင်း မှားသွားမှာ၊ လွဲချော်သွားမှာ၊ လမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာစသည်ဖြင့် စစ်မရောက်ခင် မြှားကုန်ပြီး လက်လျှော့လို်က်တာတွေ ရှိဖူးလား? ▪️ ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတာက သင့်မှာ Fear of Failure ( ကျဆုံးရမှာ ကြောက်ရွံခြင်း) ဆိုတဲ့ “Atychiphobia” တစ်မျိုး ရှိနေတာပါ။
11 Reasons Why You Should Get An MBA
အကယ်၍များ သင်က ယှဉ်ပြိုင်မှု ပြင်းထန်နေတဲ့ ယနေ့ခေတ်ရဲ့ စီးပွားရေးလောကထဲကို တိုးဝင်ရောက်ချင်သူ တစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင် ဘာတွေ အဆင်သင့်ပြင်ထားဖို့လိုလဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေထဲမှာ ပထမဆုံး ပေါ်လာမှာက ယနေ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှာ စီးပွားရေးနယ်ပယ် ပေါ်လျှောက်လှမ်းနေသူတိုင်းနဲ့ ခွဲခြားထားလို့မရနိုင်တဲ့ Master of Business Administration (MBA) ဘွဲ့ဒီဂရီ ဆိုတာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ အတွေးပါပဲ။ ▪️ ဒီလို အတွေးပေါ်လာပြီဆို သင့်ကို်ယ်သင် ပထမဆုံး ပြန်မေးရမှာက အကယ်၍များ MBA Degree Holder ဖြစ်လာတဲ့အခါ သင့်မှာ ဘယ်လို အခွင့်အရေးတွေ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်ဝလာမှာလားဆိုတာပါပဲ။
▪️ တခါတလေ ဘဝမှာ ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကို ရောက်အောင်သွားနိုင်ဖို့ရာ လုံလောက်တဲ့အရည်အသွေးနဲ့ အားအင်အပြည့်ရှိနေပါရက် ကိုယ်တကယ်ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်က ဘာမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာမျိုး ကြုံဖူးကြလား? ▪️ ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒက ဘာမှန်းမသိ မသေချာမရေရာတာမျိုး။အလွယ်ပြောရရင် Passion ဆိုတာကို ဘယ်လို ရှာရမှန်းမသိတာမျိုးပေါ့။ လူအများစုကပြောကြတယ်လေ။ Just follow your dream & passion လို့။ ခက်တာက ကိုယ့် အိပ်မက် တွေ စိတ်ဆန္ဒက ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိ မသေချာမရေရာဖြစ်နေတာကိုက ပြဿနာကိုး။ ဆိုတော့ အကယ်၍များ သင်က လတ်တလော ဒီလို အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသူ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတိုင်း မပြတ်မသားနဲ့ ကိုယ့် စိတ်က ဘယ်ကို အားသာနေမှန်းမသိတဲ့သူမျိုးဆို ဒီစာလေးကို ၁မိနစ်လောက် အချိန်ပေးဖတ်ရှုကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
“ Work smart , not hard.” “Smart work beats hard work” စသည်ဖြင့် Quote မျိုးစုံ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ဖူးမြင်ဖူးကြမှာပါ။ • အချို့ကလည်း အလုပ်တစ်ခုကို smart ဖြစ်ဖြစ် လုပ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အချို့ကလည်း အလုပ်တိုင်းမှာ smart ဖြစ်နေရုံနဲ့ မပြီးဘူးပေါ့။ Working Hard ဆိုတာ အမြဲ ကိုယ့်လက်စွဲဆောင်ပုဒ်ဖြစ်နေမှ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ရေးကြ ပြောကြတာကို ဖတ်ဖူးကြားဖူးနေကြမှာပါ။ • ဆိုတော့ ဘယ်အလုပ်မဆို Smart ဖြစ်စွာ လုပ်သင့်လား ဒါမှ မဟုတ် ကြိုးစားပြီး လုပ်သင့်လား လို့ မေးခွန်းထုတ်ရင်တော့ အဖြေက သင့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ • သင်က အရည်အချင်းပြည့်ဝစွာနဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းဆီ လှေကားထစ်တစ်ခုချင်းစီ လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ “Work Hard & Work Smart” ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
▪️ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးလိုလို ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးထဲမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ ုလုပ်ချင်တာတွေ အများအပြားရှိတတ်ကြစမြဲပါ။ ဘ၀ အတွက် ကြီးကြီးမားမား အိပ်မက်တွေကစလို့ ဘာသာစကားအသစ်သင်ချင်တယ်၊ အားကစားလုပ်ချင်တယ်၊ ဝိတ်ထိန်းချင်တယ်၊ ပိုက်ဆံစုချင်တယ် စသည်ဖြင့် အသေးအမွှား စိတ်ကူးလေးတွေ အထိပေါ့။ ▪️ ဆိုတော့ မေးစရာက ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာတွေကို ဒီတိုင်း စိတ်ကူး အိပ်မက် သပ်သပ်ပဲ ပုံဖော်ထားကြတော့မှာလား?လက်တွေ့ အသက်သွင်း ပုံမဖော်ကြတော့ဘူးလား ? ▪️ အကယ်၍များ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့ ရေးခြယ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ၃ မိနစ်လောက် အချိန်ပေး ဖတ်ရှုပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
ကျွန်တော်တို့ ကြားဖူးနေကျ စကားတစ်ခွန်း ရှိတယ်။ “Your 20s areatime of figuring out your blueprint for life” တဲ့ဗျ။ ▪️ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနေ အသက်နှစ်ဆယ်ကို ကူးပြောင်းသွားပြီဆိုတာနဲဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တရားဝင် လူကြီး ဖြစ်သွားကြပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပြီပေါ့။ ▪️ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဝတ္တရားတွေအားလုံးကို တာဝန်ယူဖို့ရာ တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ် ကို အားအင်အပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းရတော့မယ့် အရွယ်၊ အကောင်းမွန်ဆုံးသော ကိုယ်ပိုင် ဘ၀ နေထိုင်မှု ပုံစံ တစ်ခုကို ခိုင်မာစွာ ပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင် Foundation တည်ဆောက်ရတောမယ့်အရွယ်၊ နောင်တချိန်မှာ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တည်ငြိမ်တဲ့ မိမိကိုယ်ကို ပြန်မြင်နိုင်ဖို့ရာ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ဒုက္ခသုခ မျိုးစုံတွေကို ကြုံရ ဆုံရ တွေ့ရ မြင်ရတော့မယ် အရွယ် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ▪️ ဒီလို ၂၀ကျော်ဆိုတဲ့ အရွယ်ကို လူအမျိုးမျိုးကတော့ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကုန်ဆုံးဖြတ်သန်းသွားကြမှာပါ။ ဒီ အရွယ်မှာ ဖြတ်သန်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရလဒ်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပန်းတိုင် တစ်ခုဆီကို နောင်တချိန်မှာ ရောက်သွားကြမှာပါ။ ▪️ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက် ၃၀ ၊ ၄၀ မှာ ပျော်ရွှင် အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ ? တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အသက် ၂၀ကျော် အရွယ်ကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းသင့်သလဲပေါ့ဗျာ။ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပြီး မှန်၊မမှန် သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်ပါဦး။
အချိန်ဆွဲတတ်တဲ့အကျင့်ကို လူအချို့က အပျင်းတက်တဲ့အကျင့်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အချိန်ဆွဲခြင်း (Procrastination) နဲ့ အပျင်းတက်ခြင်း (Laziness) ဆိုတဲ့ သဘောတရားက မတူညီပါဘူး။ အချိန်ဆွဲခြင်း (Procrastination) ဆိုတာက ဘာမှမလုပ်ဘဲ ပျင်းနေတာမျိုးထက် ကိုယ်က Active ဖြစ်နေရက်နဲ့ကို လုပ်ရမယ့် အလုပ်အစား အခြားအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ▪️ ဆိုတော့ သင်က ပျင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘဲ အလုပ်တွေကို အချိန်ဆွဲ၊ အချိန်မီ မပြီးမစီး အမြဲဖြစ်နေတတ်သူဆိုရင်တော့ ဒီအကျင့်ဆိုးကို ပြင်နိုင်ဖို့ရာ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
10 business and leadership books that have helped MBA students succeed in the business world
သင်က စာဖတ်ဝါသနာထုံသူတစ်ဦး၊ တချိန်မှာ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကို ဦးဆောင်လိုသူတစ်ဦး၊ လက်ရှိမှာလည်း စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Business Management ပိုင်းတွေကို Master Degree ရယူဖို့ ကြိုးစားသင်ယူနေသူတစ်ဦးဖြစ်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးလောကထဲမှာ အောင်မြင်စွာရပ်တည်နိုင်ဖို့ရာ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ့်၊ သိထားဖတ်ထားသင့်တဲ့ Business & Leadership ပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
The Importance of Education in Your Career
“A man without an education is likeabuilding withoutafoundation” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ ကောင်းမွန်တဲ့ Career Pathway ကို လျှောက်လမ်းချင်ရင် ကိုယ့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေး အခြေအနေတစ်ခုတော့ ရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ ပညာရေး အခြေအနေကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ Career လမ်းကြောင်းဆိုတာ Foundation မကောင်းတဲ့ အဆောက်အဦးတစ်ခုလိုပါပဲ။ ရေရှည်ခိုင်ခံ့နေဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
“Education isasocial process. Education is growth. Education is notapreparation for life; education is life itself” လို့ John Dewey ဆိုခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ။ ပညာရေးကဏ္ဍဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုမှာ အရေးပါဆုံးအရာအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ Social Process တစ်ခုပါ။ ဘဝအတွက် တဆင့်ထက် တဆင့်ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှု တစ်ခု လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက် ပညာရေးဟာ ဘဝအတွက် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားရမယ့် အရာဆိုတာထက် ပညာရေးဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကိုက ဘဝရဲ့ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ပညာရေးဆိုတာ ကျောင်းတစ်ကျောင်းက အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိထားတာမျိုးကိုသာ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်သင်ယူထားတဲ့ ဗဟုသုတ အသိပညာတွေနဲ့အတူ အမှန်အမှား ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းရှိတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
How to make better decision in life
ဘဝအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဘယ်လိုချမှတ်ကြမလဲ ? လူသားတိုင်းရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုခု မချဘဲ ဖြတ်သန်းရတဲ့ နေ့ ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နေ့တိုင်းလိုလို ကျွန်တော်တို့က ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ရင်း ရှင်သန်နေကြရတာပါ။ ဒီနေ့တော့ ဘယ်သွားမယ် မနက်စာကို ဘာစားမယ် စတဲ့ နေ့စဉ် ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေကနေတဆင့် ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ ဘယ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းကို ရွေးမယ် ဘယ် နေရာမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုမယ် ဘဝကို ဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့နေထိုင်မယ် စတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကြီးမားမားတွေကို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပြီး နေထိုင်ရှင်သန်နေကြသူချည်းပါပဲ။